महासंघको नेतृत्वले सबैखाले पत्रकारहरुको मनोविज्ञान समेटेर अघि बढ्नुपर्छ — Chetana Online
महासंघको नेतृत्वले सबैखाले पत्रकारहरुको मनोविज्ञान समेटेर अघि बढ्नुपर्छ
सविन प्रियासन (अध्यक्ष),
नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा
नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासन दाङको पत्रकारिता निकै फराकिलो भएकाले यसको बिकासका लागि सबै क्षेत्रबाट उचित पहल हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । पत्रकार महासंघको नेतृत्वले जिल्लामा रहेका सबैखाले पत्रकारहरुको मनोविज्ञानलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । पत्रकार महासंघको रजत महोत्सव, महासंघका काम, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर चेतना अनलाइनका सम्पादक पाण्डव शर्माले गरेको कुराकानी । –सम्पादक
नेपाल पत्रकार महासंघ दाङले रजत महोत्सव मनाएको छ । आजको दिनसम्म आउँदा दाङको पत्रकारिता कुन चरणमा प्रवेश गरेको छ ?
हो हामीले पत्रकार महासंघ दाङ शाखाको रजत महोत्सव विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाएका छौं । हामीले महासंघको रजत महोत्सवको अवसरमा पुस १ र २ गते दाङको क्षेत्र नं. १ र ३ मा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुसँग देउखुरी र तुलसीपुरमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम आयोजना गरेर जिल्लाको समृद्धि र विकासका सन्दर्भमा गहन अन्तरक्रिया ग¥यौं भने पुस ३ गते रक्तदान तथा ४ गते विशेष समारोहका बीच शुभकामना आदान–प्रदान, पुरस्कार वितरण र सम्मान कार्यक्रम गरेर रजत महोत्सव मनाएका छौं ।
मेरो नेतृत्व भएको बेला रजत महोत्सव मनाउन पाउँदा मलाई निकै खुसी लागेको छ । दाङको पत्रकारिता मोफसलमै उत्कृष्ट भएको कुरा सबै क्षेत्रको निष्कर्ष रहेको छ । अहिले हामी यहाँको पत्रकारितालाई कसरी सुदृढ, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकिन्छ भनेर लागेका छौं ।
दाङको पत्रकारिताको विकासलाई हेर्ने हो भने यसले मुलुककै नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ भन्न सक्छौं । अहिले पत्रकार महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष र सचिव दाङकै हुनुहुन्छ । अहिले नेपालको पत्रकारिताको नेतृत्व दाङले नै गरेको छ ।
अर्को कुरा, दाङमा पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमको विकास तीब्र गतिमा भइरहेको छ । स्थापनाकालमा झोलामा सञ्चालन भएको पत्रकार महासंघ अहिले भव्य भवनमा छ । यसको जस हाम्रा अग्रजहरुको पहलकदमी नै प्रमुख हो । सूचना प्रविधिको विकाससँगै अबको पत्रकारिता पनि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्छ । विगतमा दाङ वा समग्र मुलुकको राजनीतिक एजेण्डा नै सञ्चार माध्यामका मुख्य विषय हुन्थे । अब मुलुकको संक्रमणको अन्त्यसँगै समृद्धिको दिशामा अघि बढेको छ । समृद्ध मुलुकको लागि समृद्ध मिडिया आवश्यक छ । सञ्चारमाध्यामको भौतिक संरचनाको विकासले मात्र यहाँको पत्रकारिता ठिक ढंगले अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसका लागि हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादनतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । र त्यसका लागि पत्रकार महासंघले उचित पहल गरिरहेको छ ।
पत्रकार महासंघका अबका कार्यक्रम के हुन् ?
हामी भौतिक रुपमा धेरै सम्पन्न भइसकेका छौं । केही भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भने ध्यान दिनैपर्नेछ । हामीले यहाँका सञ्चारकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी साना लगानीका मिडियाहरुको प्रवद्र्धनको लागि हामीले राज्यसँग उचित पहल गर्ने छौं । सञ्चारकर्मीहरुलाई खोज पत्रकारितामा प्रेरित गर्नका लागि पत्रकार महासंघ दाङ शाखाले विभिन्न फलोसीपका कार्यक्रमहरु ल्याउने छ ।
अहिले दाङको पत्रकारिता निकै फराकिलो भइसकेको छ । सदरमुकाम घोराही केन्द्रित पत्रकारिता अहिले जिल्लाव्यापी विकेन्द्रित भइरहेको छ । २/४ जना व्यक्तिहरुले शुरु गर्नुभएको पत्रकारिता अहिले विशाल भइसकेको छ । सयौं पत्रकारहरु सदस्य रहेको ठूलो परिवार भइसकेको छ पत्रकार महासंघ दाङ शाखा । अहिले पनि हामीले पत्रकार महासंघलाई २५ बर्ष अगाडिकै आँखाले हेर्नु हुँदैन । विशेषतः २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि दाङमा तीब्र रुपमा सञ्चार माध्यम खुलेका छन् । एक दशकभन्दा पहिलेसम्म पनि पत्रकार महासंघको परिवार सानो थियो । त्यतिबेला सबै सञ्चारकर्मीहरु बीच प्रत्यक्ष चिनजान हुन्थ्यो । तर,अहिले सबैले सबैलाई चिन्न सक्ने अवस्था छैन । यो स्वाभाविक पनि हो ।
पत्रकार महासंघमा तपाई दुईपटक सचिव, एकपटक सल्लाहकार हुनुभयो । अहिले अध्यक्ष भएर काम गरिरहनुभएको छ । तपाईलाई यहाँका पत्रकारहरुको समस्या र मनोविज्ञान राम्रोसँग थाहा छ । दाङको पत्रकारितालाई व्यवस्थित गर्नका लागि कुन क्षेत्रबाट के पहल हुन जरुरी छ ?
हो, मैले पत्रकार महासंघको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर करिब १० वर्ष काम गर्ने मौका पाएँ । पछिल्लो तीन वर्ष सल्लाहकार भए पनि म पत्रकार महासंघको हरेक गतिविधिमा सरिक भएँ । मलाई यहाँको पत्रकारिताको समस्या र पत्रकारहरुको मनोविज्ञानको बारेमा राम्रोसँग थाहा छ ।
यहाँ विशेषतः तीन/चार पुस्ताको पत्रकारहरु हुनुहुन्छ । एउटा स्थापनाकालका पत्रकारहरु, अर्को २०६२/६३ सालभन्दा अगाडिदेखि पत्रकारिता शुरु गर्नुभएका साथीहरु हुनुहुन्छ । त्यस्तै जनआन्दोलनपछि पत्रकारिता शुरु गरेका पत्रकारहरुको संख्या निकै धेरै छ । अर्को पुस्ता पछिल्लो दुई/तीन बर्षदेखि पत्रकारितामा आएको छ । क्षमता र बुझाइका हिसाबले सबैका आ–आफ्ना मनोविज्ञानहरु छन् । ती सबैखाले मनोविज्ञानलाई समेटेर पत्रकार महासंघलाई अगाडि बढाउनु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो ।
अब हामी कसैले पनि पत्रकार महासंघ भनेको हाम्रो बुझाई र हाम्रो पेरिफेरिको जमात मात्रै हो भनेर बुझ्नु हुँदैन । पत्रकार महासंघमा आवद्ध भइसकेपछि सबै एउटै परिवार हो । परिवारमा सबैको हक, अधिकार बराबर भएजस्तै पत्रकार महासंघमा पनि सबै सदस्यहरुको बराबर स्वामित्व हुन्छ । यसलाई हामीले सही ढंगले बुझ्न सकेनौं भने गलत दिशामा जान्छौं । त्यही भएर हामीले अहिले अग्रजदेखि नयाँ पुस्तालाई समेटेर अघि बढिरहेका छौं ।
अहिले पत्रकार महासंघ दाङको नेतृत्व युवा पुस्तामा आएको छ । यो इतिहासको आवश्यकता पनि हो । यसलाई सबै तह र तप्काले स्वीकार गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ । यसलाई पनि हामीले राम्रै उपलब्धि मानेका छौं । यस क्षेत्रको पत्रकारिताको विकासका लागि राज्य, सञ्चार माध्यम र स्वयम् पत्रकारहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
केही अग्रज पत्रकारहरु तपाईहरुसँग त्यति धेरै सन्तुष्ट हुनुहुन्न भन्ने सुनिन्छ । तपाई अध्यक्ष भएर सबैलाई समेट्न किन नसक्नुभएको ?
लोकतन्त्रमा विचार राख्ने स्वतन्त्रता सबैलाई हुन्छ । पत्रकार महासंघमा पनि धेरैखाले मनोविज्ञान भएकाले धेरै धारणा आउनु स्वाभाविक हो । नेतृत्वले गर्ने भनेको सबैखाले मनोविज्ञानहरुलाई सही ढंगले समेटेर अघि बढ्ने नै हो । हामी पत्रकार महासंघमा निर्वाचनको माध्यामबाट आएका हौं । निर्वाचनमा हामीलाई दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्य पत्रकार साथीहरुले निर्वाचित गर्नुभएको हो । त्यसैले हामी निर्वाचनको म्याण्डेटअनुसार अघि बढिरहेका छौं । हामी सबैखाले पुस्तालाई समेटेर अघि बढिरहेका छौं । अग्रजलाई सम्मान गरेका छौं । नयाँ पुस्तालाई प्रोत्साहन गरेका छौं । यसमा कोहि असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
पत्रकार महासंघ सबैको साझा भएको कुरा अग्रज मित्रहरुले पनि स्वीकार गर्नैपर्छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनको म्याण्डेटलाई स्वीकार गर्नैपर्छ । आम पत्रकारहरुको चाहना विपरित कसैले पत्रकार महासंघलाई आफ्नो ढंगले चलाउन खोज्छ भने त्यो गलत हो । हामीले अग्रजहरुबाट सुझाव, सल्लाह लिन्छौं । उहाँहरुले सल्लाह र सुझाव दिने हो हस्तक्षेप गर्ने होइन ।
अग्रज मित्रहरुले पत्रकारहरुले निर्वाचनमा देखाएको अभिमतलाई स्वीकार गर्ने हो भने कुनै समस्या आउँदैन । यस्ता साझा संस्थाहरुमा सधैं आफूले चाहेजस्तो नहुन सक्छ । दुई कार्यकाल पहिले नै म अध्यक्षको दौडमा थिएँ । अघिल्लो कार्यकालमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर म पराजित भएको थिएँ । तरपत्रकार महासंघको विकासका लागि निरन्तर अविचलित भएर लागिरहें । आफू नेतृत्वमा नगए पनि पत्रकार महासंघ व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहिरह्यो । त्यसको फलस्वरुप मलाई सबै सञ्चार संगठनहरुले साझा उम्मेदवारको रुपमा स्वीकार गरे । त्यसैले आफू भए सबै ठिक आफू नभए सबै बेठिक भन्ने धारणा हामी सबैले हटाउनै पर्छ ।
तपाई अध्यक्षको उम्मेदवार बन्दा श्रमजीवी पत्रकारहरुको अधिकारका लागि लड्छु भन्नुभएको थियो । काम त केही गर्न सक्नु भएन नि ?
पत्रकार महासंघमा हामी नेतृत्वमा पुगेको एक बर्ष भयो । यस अवधिमा हामीले यहाँ बाँकी रहेको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा ध्यान दियौं । अहिले हामी सबै श्रमजीवी पत्रकार ऐन कसरी लागु गर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक गृहकार्यमा लागेका छौं । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन पत्रकार महासंघको प्रमुख एजेण्डा नै हो । हामी हाम्रो कार्यकालमा यो एजेण्डा कार्यान्वयनका लागि उचित पहल गर्ने छौं । केही समयभित्रै हामीले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि चरणबद्ध कार्यक्रमहरु ल्याउने छौं ।
म पत्रकार महासंघको रजत जयन्तीको अवसरमा सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी तथा दङाली सञ्चार माध्यामहरुलाई हार्दिक बधाई अनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । अनि यस क्षेत्रको पत्रकारिताको विकासका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्न अपील पनि गर्दछु ।
प्रकाशित मिति: December 20, 2017